Taliska bilayska Puntland oo kormeeray xarumaha booliska ee Boosaaso. – Radio Daljir
Taliska bilayska Puntland oo kormeeray xarumaha booliska ee Boosaaso.
Diseembar 3, 2016 10:04 b 0
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Eng C/qaadir shire faarax Erag oo Maanta gaaray Magaallada Bosaso ee Xarunta Gobalka Bari ayaa kormeer ku tagay Saldhig-yada Ciidamda Booliiska ee Magaalada Bossaso iyo Xarumo kale,
Taliyaha ayaa kormeerkiisa ka bilaabay Saldhiga dhexe ee Bossaso halkaaso uu ugu tagay Ciidamada Saldhigaas oo waajibaadkoodii shaqo gudanaya,isagoona uga sii gudbay Saldhigyda biyo Kullule , Nuur Salaad ,Saldhiga dhexe ee Bassaso ,Saldhiga Ciidamada Wadooyinka Gobalka Bari iyo Bangiga Lacagta ee Dowlada Puntland.
Maamulka Gobalka Bari,Taliska Qaybta iyo Xeer ilaaliyaha guud ee Dowlada Puntland ayaa kormeerka ku wehliyay Taliyaha Booliska Puntland oo ay la socdeen Saraakiisha sar sare ee Ciidamada Booliska
Puntland ah ,kuwaaso qayb ka ah Tirkoobka Lagu samaynayo socda Booliska Puntland.
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Eng C/qaadir shire faarax Erag oo markii kormeekiisa uu so dhameeyay warbaahinta la hadlayay ayaa waaliidiinta dhalay Caruurta habeenkii Magaalada Bossaso fawdada ka samaysa ka codsaday inay caruurtooda ilaashadan inta aanan la horkeenin Sharciga oo boolisku gacanta ku so dhigan,isagoona xusay in cidii gacanta u so gasho aysan sahlanaan doonin la siiyo iyadoo aanan sharciga la horkeenin.
Sidoo kale,Taliyaha Booliska Puntland Eng Erag ayaa sheegay inta uu kormeeka jiro Ciidamda uu ka diiwan-gaaliyay Saldhigyada iyo Rugooda ay yihiin Ciidamo boolis Sax-da ah blse Askri maqan uusan ahayn mid u tirsan Taliska Ciidamda Booliska oo tirkoobid iyo dib u habay lagu wado.
Dhinaca kale,Taliyaa Ciidamda Booliska Puntland Eng C/qaadir shire faarax Erag ayaa sheegay in Boolisku Cadaalad u samayndoonan shacabka oo tirsanaya Cadaalad-darooyin horay uga dhacay Saldhigyada Qaarkood ,isagoona intas ku daray in Madax iyo Mijo’ba u wada simanyihiin sharaciga iyo Qaynuunka dalka u yaal.
Ugu Danbaytii,General Erag ayaa tilmaamay in uu siiwadi-doono kormeerada uu ku tagayo Dhamaan goobaha Ciidamda Booliska Puntland si ayuu yiri aan u ogaano wadashqaynta Booliska iyo Shacabka deegaanada ay ka shaqeeyan oo uu sheegay in isfahmkoodu uu ku xiran-yahay Amniga guud ee Puntland.iyo sidii tirakoob sax lagu samayn lahaa Askartaa shaqaysa iyo midka aanan shacabka u shaqayn.
Kor u qaadista canshuuraha Puntland oo looga hadlay Boosaaso.
DHEGEYSO-Sanatar Faroole oo kahor yimid hadal kasoo yeerayy gudiga doorashada.